Creative Writing » ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့	28
လုလု မှာ အိမ်နားကသူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေ များတယ် ကျောင်းမှာဆို မိန်းကလေး တွေနဲ့ ပေါင်း ရတယ် ။ အိမ်ကအစ်ကို အစ်မ တွေနဲ့ ဆို အသက်က အရမ်းကွာတယ် လေးနှစ်လောက် ငယ်တဲ့မောင်လေးကိုသူငယ် ချင်းလို ပေါင်းရတော့ မောင်လေးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက လုလု ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ ။ တခါတလေ အစ်ကို ကမြစ်ဆိပ်မှာငါးမျှားသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ တွေ့ ရင် သူ့ အနားက မခွာတော့ဘူး လိုက်ချင်လို့ မူယာမာယာတွေ များနေတတ်တယ် ငါးသာမျှားချင်တာ တီကောင် တွေဆို အရမ်းရွံ တယ် မကိုင်ရဲဘူး တွန့် တွန့် နဲ့ အသည်းယားလွန်းလို့ ကြောက်တာလည်း ကြက်တီးတောင်ထတယ် ။ ငါးမျှားလိုက်ချင်တော့ ရေပုံး ကိုင်ပေးမယ် ၊ငါးစာ ခွက်ကိုင်ပေးမယ် ဘာဘာညာညာ အရဲစွန့် ပြီးပြောရတာပေါ့ ။ “အေး လိုက်ခဲ့ “ဆို ကိုယ့်လောက်ပျော်တဲ့သူ လောက မှာ မရှိလောက်ဘူးလို့တောင် သွေးနှာထင် ရောက် လိုက်သေးတယ် :-):-) ။ နောက်ဝါသနာ က အစ်ကိုက ရပ်ကွက်အစွံ မြစ်ဆိပ်ကမ်း တောစပ် တလျှောက် ငှက်ပစ်သွားဦးမယ် ဟေ့ ဆိုလည်း လိုက်ချင်ပြန်ရော ။ လူကလက်တောက်လောက် လုပ်ချင်တာ တွေက တုတ်နဲ့ ဓါး နဲ့ တကယ့်ပေသီးး ။ ဘယ်လောက်တောင် ဆိုးခဲ့လည်း ဆို တနေ့ အစ်ကိုက ဂျင် (ကြိုးနဲ့ ရစ်ပြီး ပစ်ပေါက်ကစား ရတဲ့ ကစားစရာ တခု ) ကို မန်ကျည်းကိုင်း တကိုင်းခုတ်ပြီး ဂျင် အသေးအကြီးဆိုဒ် စုံ လုပ်နေတာကို အားကျပြီး တစ်ခုလောက် လုပ်ပေးဖို့ သွားပူဆာတာ မရတာနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဓါးတစ်ချောင်းယူပြီး သွားခုတ်လိုက်တာ လုလု ရဲ့ လက်ညိုးထိပ်လေး ပါသွားပါရောလား ။ နာလိုက်အရမ်းပဲ တော်သေးတာပေါ့ အရိုးတွေမထိသွားလို့ နို့ မို့ ဖြတ် လိုက်ရမယ် သာဆိုရင် မတွေးရဲ စရာပဲ ။ ခုနေများ တွေးကြည့်မိတာ ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော် စပ်စလူး ထခဲ့တာပဲလို့။ ၄။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ . . .
မောင်ငယ်လေးနဲ့ လုလု နဲ့ အတည့်အတူနေ မမြင် ချောင်းကြည့် ရတဲ့ နှစ်ယောက် ပေါ့ ။ အိမ်မှာနှစ်ယောက် တည်း ရှိတဲ့အချိန်ဆို စ ရင်း နောက်ရင်း ကနေ ထသတ် ကြပါလေ ရော ။ ငယ်တဲ့သူက ငယ်လို့ ဗိုလ်ကျချင်တယ် ၊ကြီးတဲ့သူ ကလည်းကြီးလို့ ဆရာလုပ်ချင်တယ် အဲ့နှစ်ယောက် တွေ့ လိုက်တိုင်း အေးချမ်းပြေလည်နေတယ် ဆိုတာ မရှိဘူး ပြဿနာဖြစ်တိုင်း အဒေါ်တွေက ရှင်းရ အဖွားက ရှင်းရနဲ့ ဘယ်သူမှအငြိမ်မနေ ရဘူး ။ကျောင်းမှာဆို မောင်လေးက သူငယ်တန်း လုလုက ဒုတိယတန်း ၊ တနေ့ကျောင်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့ လာတော့ ကျောင်းသူ/သား အားလုံး ကိုယ်အလေးချိန် ချိန် ကြတော့ တစ်ကျောင်းလုံးမှာ မောင်ငယ်လေး က အနည်းဆုံး အပေါ့ဆုံး အသေးဆုံး ဖြစ်နေတယ် ။ တခါတလေ လုလု ရှိတဲ့ကျောင်းခန်းထဲလာပြီး တိုင်တယ် သူ့ ကို သူတို့ အတန်းခေါင်းဆောင် ဖက်တီး က ထုတယ် အနိုင်ကျင့် နေတယ် ဆိုပြီးးလုလုလည်း မောင်ငယ်လေး နောက်က လိုက်သွားး ဟိုဖက်တီး “နင် ငါ့မောင်လေး ကိုအနိုင်ကျင့် နေတယ်ဆို (သူ့ ခေါင်းကိုတချက်ခေါက် ) နောက်တခါ အနိုင်ကျင့်တယ် ကြားလို့ ကတော့ နင့်ခေါင်းကဆံပင် ကိုပြောင်အောင်နှုတ်ပစ်မယ် ဟင်း ဘာမှတ်နေလဲ “(ခါးထောက်ပြီး မျက်နှာတည်နဲ့ ပြော ) အဲလို သူများ နားမှာဆို ချစ်လိုက်ကြတာ ကာကွယ်ပေးရတာ အမော အိမ်ရောက်ပြီဟေ့ ဆိုရင် သူ နဲ့ ကိုယ် ရန်သူပဲ ။ တခြားမောင်နှမ တွေရော အဲ့လို ပဲလား မသိဘူး ။ မုန့် လင်မယား မြင်တိုင်း မမေ့ နိုင်တဲ့အဖြစ်လည်း ရှိသေးရဲ့။ လုလု ရဲ့ အဒေါ် အငယ် ဆုံးနဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်း ယောက်ကလျှာ တစ်ယောက်နဲ့ မုန်ဖိုးလေး ရှာမယ်ဆိုပြီး အိမ်ရှေ့ မှာ တဲလေး ထိုးပြီး မုန့် လင်မယား ကြော်ရောင်း ကြတာ တစ်ညနေ လုလုနဲ့ မောင်လေး နဲ့ ဟိုပြော သည်ပြော နဲ့ စနောက်ရင်း ရန်ဖြစ် စကားများ နေကြရင်း ဒေါ်လေးငယ် တို့ အကြော်တဲ နားကိုရောက်လာကြတယ် ၊ ဒေါ်လေး တို့ လည်း အခုမှ စကြော် ခါစ ပဲရှိသေးတယ် ၊ မောင်လေး က မြင်းချီးခြောက် ခဲနဲ့ လုလု ကိုပစ် လိုက်တာ လုလုကိုကျော်ပြီး ဒေါ်လေး တို့ ရဲ့ မုန့် နှစ်ရည် အိုးထဲ တန်းတန်းမတ်မတ် ကျပါ လေရော လား ။ အဲ့ ချိန်မှာ ဒေါ်လေးကို လာလာ ကြောင် နေတဲ့ အရက်သမားက အချိန်မှန် ပုံမှန်ရောက်လာတယ် ရေချိန်လည်းကိုက်နေ ပုံရတယ် ။ လုလုတို့ မောင်နှမ ဒေါ်လေးရဲ့ ကြိမ်းမောင်းဆူဆဲ ဒဏ်ကနေ ခဏ အနားရတယ် ။ ဒေါ်လေးတို့ မှာ ဟိုအမူးသမား ကိုလည်း ဈေးရောင်းချင် ၊လုလုတို့ ကိုလည်း ရိုက်ချင် ၊ မုန့် နှစ်ရည် အိုးမှာလည်း မြင်းချီးခြောက် အမြန် ဆယ် ထုတ် လိုက်ပေမယ် သဲ တရှပ်ရှပ်နဲ့ ကျန်ခဲ့တော့ ဒေါသ တွေအလိပ် လိုက် ဘယ်လို ထွက်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေမှာပေါ့ ။ ဟိုအမူးသမားလည်း ကျန်တဲ့မုန့် လင်မယား အကုန်ဝယ်မယ် အိုးထဲက ဟာတွေပါ ကြော်ပေးဆိုတာနဲ့ ဒေါ်လေးတို့ နှစ်ယောက် မုန့် နှစ်ရည်အကြောင်း ဖွင့် ပြောရခက် ၊ငြင်းရခက် နဲ့ နောက်ဆုံး ဝယ်နေကြဖောက်သည်တော့ အပျက်မခံနိုင်လို့ နဲ့ တူတယ် မုန့် နှစ်ရည် ကိုအပေါ်ယံ အသာ ခပ်ပြီးရတဲ့အထိ ကြော်ပေး လိုက်တယ် လို့ ပြောသံကြားလိုက်ပါတယ် ။ ဟိုလူ စားတာကို မြင်ယောင်ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲက အော်ကလီ ဆန် လာတယ် ။
အခုတော့ ပူပင် သောက မရှိတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်ချင်တယ် ။ လုလု (တောင်ကြီး )
26.3.2015 About Sine Sant
Mr. MarGa says: ပြန်လွမ်းသွားပြီ ငယ်ဘဝကို
အခုထိ ဂျင်မပေါက်တတ်ဘူး ပြီးတော့
lu lu says: လုလု တို့ မောင်နှမ များတော့ ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ 
ခင်ဇော် says: http://mandalaygazette.com/177167
lu lu says: ကလေး တုန်းက လူတိုင်း ကညင်းကျော ထကြတာပဲနော်
Alinsett@Maung Thura says: အဲ့လိုပါပဲ
lu lu says: ငယ် လို့ တော့မရတော့ဘူး
Mike says: .အင်း..လူတိုင်းမှာတော့ကိုယ်စီငယ်ဘ၀ပျော်စရာအမှတ်တရလေးတွေရှိမှာပါပဲ
♫♪♫ငယ်စဉ်က ကလေးတို့ဘ၀ဟာ♫♪♫ ပျော်ပါးဖို့ရာ လွယ်ပါတယ်♫♪♫…… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: သူများခြံထဲက ဘာသီးပဲဖြစ်ဖြစ် မရရ အောင် ခူး
ခင်ဇော် says: ချစ်စရာ လုလုလေးနေမှာ …
lu lu says: ခု တော့ စပ်စလူးအကြီးစား ပေါ့
Kaung Kin Pyar says: အားပေးဖတ်ရှုသွားပါတယ်..လုလုရေ…
lu lu says: ဟုတ် ကျေးဇူးပါ
sorrow says: လုလုတွေက စိတ်ကြီးတတ်တယ်ခင်ဗျ… အိမ်ကအမေလဲ လုလု…ဖြူဖွေးလဲလုလုပဲ …. အဲ့ဒုတိယသမီးတွေက ချောတတ်တယ်ဗျ ….
lu lu says: စိတ်က ကြီးတာအမှန်
တောင်ပေါ်သား says: သြော် မြစ်ကြီးနားသူလေးကိုး
lu lu says: မြစ်ကြီးနားမှာ အကြိုက်ဆုံးက မြစ်ဆိပ်ထဲ ရေသွားကူးရတာပဲ
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပျော်စရာကြီးနော်…. နယ်မှာနေရတဲ့ ကလေးဘဝများ သိပ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲ…
lu lu says: ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာလေ စိတ်ကျဉ်းကြပ်ရလေပဲ
naywoon ni says: လွမ်း​အောင်​ဖန်​​နေတာလား ဟင်​ ! မြစ်​ကြီးနားမှာ ခွစ္စ မတ်​​နေလားမသိ စားခဲ့ရတဲ့ ကြ်​သားဆန်​ပြုတ်​ ။ အရည်​မပါ ။ ငှက်​​ပျောဖက်​နဲ့ ထည့်​​ကျွေးတာ လွမ်းမိတယ်​ ။
lu lu says: အရည်မပါတဲ့ဆန်ပြုတ်ဆိုမစားတတ်တာအမှန်
uncle gyi says: မှန်တယ်လုလု
Courage says: ကြူနူးစရာ ငယ်ဘ၀လေးတွေအကြောင်းကို ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
lu lu says: ဟုတ် ခုလို ဝင်ရောက်အားပေးသွားတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လူတိုင်းမှာတော့ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ငယ်ဘဝတွေကို ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာ ပါ
ဦးကြောင်ကြီး says: ..ကျီးလျင်မှီ ငဲလျင်ချီဒဲ့.. ကေအိုင်အေ လုမ ဒလောက် ငယ်ခြင်ယဉ် ကိုယ့်ထပ်တနှစ်နီးပါး ကျီးဒဲ ကကြောင့်ကို မှီလိုက်ပါရား…။ လူလစ်ယဉ် teaဇို့..
lu lu says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2278
Ma Ei says: ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့…
lu lu says: တူတူပဲပေါ့ နော်
အောင် မိုးသူ says: ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေစဉ်းစားမိတိုင်း ……